Amasayithi Womculo Avinjiwe (2020) - Lalela Umculo Nomaphi - Ezokuzijabulisa
Umculo ufana nomuthi futhi futhi ungumuthi omuhle kakhulu esake saba nawo njengoba unomthelela omkhulu ezimpilweni zethu.Sonke siyathanda ukuzwa umculo kuzo zonke izimo. Kungaba lapho sijabule, sidabukile noma sicindezelekile. Sifuna okuthile okuhlobene nakho futhi kuyasiza nokushintsha imizwa yethu.
Kulezi zinsuku kunobuchwepheshe obusha obuningi kangangokuthi manje sesingafinyelela kumculo oku-intanethi. Njengoba kunamawebhusayithi amaningi ahlinzeka ngomculo oku-inthanethi, manje usungalalela umculo wakho owuthandayo noma kuphi.Kunezindawo eziningi zomculo ezingavuliwe lapho ungalalela khona umculo.
Iqiniso ukuthi ngenxa yezizathu ezithile, izikole eziningi noma amakolishi avimba amasayithi athile, konke lokhu kungenxa yokutholakala kokuqukethwe okuthile okunodlame noma yini. Ngakho-ke, amasayithi afinyelelekayo aziwa njengamawebhusayithi womculo angavinjelwe. Lawa masayithi kulula kakhulu ukuwafuna futhi akhululekile ukulanda.
Amasayithi Omculo Angavinjelwe Kahle 2020:
Lapha sizokubhala uhlu lwamasayithi omculo angavuliwe aphezulu:
KuPureVolume, empeleni ungawuthola umculo wazo zonke izinhlobo ezibandakanya namathrekhi amadala athumbe izigidi zezinhliziyo zabantu.IPureVolume ihlale isesikhathini futhi inomculo othandwa kakhulu ngezikhathi zonke. Ungase futhi ukwazi ukucinga umculo wakho owuthandayo, ama-albhamu noma abaculi ngisho nemicimbi.
IPureVolume yisayithi lomculo elingavinjelwe elingafinyeleleka kunoma iyiphi indawo. Akunandaba ukuthi ukuphi. Ngakho-ke, uma usesha umculo othile wanoma yiluphi uhlobo lokugubha noma amaphathi, ake ngikutshele ukuthi usepulatifomu elifanele njengoba iPureVolume izokunikeza zonke izinhlobo zomculo ngokuya ngokuthanda kwakho nalokho okuthandayo.
IGrooveShark ifana nenye yezingosi zomculo ezingaziwa kakhulu ezingavuliwe.Iwebhusayithi ethandwayo ukulalela noma imuphi umculo wamahhala ngaphandle kwesidingo sokubhalisa. Isetshenziswa ezikoleni, ekolishi, nasezindaweni zokusebenza.Inezici eziningi ezahlukahlukene ezinikezwa isayithi kubasebenzisi bayo. Ezinye zezici zibandakanya ukusesha ingoma noma umculi.
Abasebenzisi bayo bangalanda futhi izingoma noma ngabe bathanda ini. Ngakho-ke, bangayilalela ngokuhamba kwesikhathi lapho bengaxhunyiwe ku-inthanethi futhi.Engikuthanda kakhulu ngeGrooveShark ukuthi empeleni ikunikeza ukufinyelela kwamahhala kuma-albhamu oMculo uqobo. Ngakho-ke, lapha ungathola ngisho namathrekhi akamuva ahamba phambili noma ama-albhamu, amavidiyo nanoma yiziphi izingoma ezizayo kuwebhusayithi yabo.
Ungazenzela uhlu lwadlalwayo ngaleli sayithi futhi ungasesha futhi udlale izingoma zakho ozithandayo ngezinyathelo ezilula. Inqubo yokusebenzisa isiza ilula futhi iqondile. Odinga ukukwenza nje, udinga nje ukuvakashela isiza bese ufaka noma iyiphi ingoma noma umculi owufunayo bese uqala ukuyilalela.
Uma unesifiso sokulanda umculo bese umane uchofoze igama lengoma futhi uzobona inkinobho yokulanda.Ngakho-ke, uma ufuna iwebhusayithi eneqoqo elikhulu lomculo, kufanele uvakashele leli sayithi.
Lesi siza somculo esingavinjelwe siyisayithi yamahhala ye-inthanethi esakaza izingoma eziningi ezithakazelisayo futhi ezilutha ngokweqile. Kunezigidi zezingoma ezitholakala kuSlacker.Le sayithi futhi ilula kakhulu ukuyisebenzisa. Ungavele uvakashele ikhasi labo eliyisiqalo bese ubona uhlu lweziteshi zamahhala ongasakaza kuzo imisakazo.
Abantu babheka iSlacker Radio njengenye yamapulatifomu amahle kakhulu okusakaza umculo kusuka ngempendulo nezilinganiso.Ngakho-ke, ngokuyisisekelo banikela ngokubhaliselwe okukhokhelwayo. Kepha, i-akhawunti yamahhala inikezwa nenombolo ethile yomkhawulo we-inthanethi yomsakazo ukukhulula nabasebenzisi.
Uma ufuna ukulalela noma imuphi umculo, vele uqiniseke ukuthi ukhetha uhlobo lohlobo, olukukhombisa olunye uhlu.Imininingwane yomculo othile iyabonakala ngesithombe somculi.Manje, konke okudingeka ukwenze nje, chofoza nje inkinobho ethi Dlala ukuqala ukusakaza.
4. I-Google Music
Le webhusayithi ingumkhiqizo weGoogle ngakho-ke ayivinjelwa yisiphi isikole noma ikolishi noma enye indawo yokusebenza. Uma ngikhuluma iqiniso, lokhu kufana nenye yamawebhusayithi engiwathandayo ukulalela umculo.Lapha ungathola cishe zonke izingoma. Kunama-albhamu amaningi atholakala kulo mculo we-Google futhi.Nansi inketho yokubhaliselwe okukhokhelwayo okuqala kusuka ku- $ 99.99 ngenyanga.
Kulokhu okubhalisile, kukuvumela ukuthi ususe izikhangiso ezingafuneki futhi uvule ezinye izici ezimangazayo.Kepha kwabanye abasebenzisi, abangafuni ukuya kokubhaliselwe okukhokhelwayo, ukubhaliswa kwamahhala kuyatholakala futhi ukujabulela umculo wamahhala.
Futhi zinezinhlelo zazo zamahhala abasebenzisi abangazisebenzisela ukuthola isipiliyoni esisheshayo futhi esingcono. Kepha, uma ujwayele inguqulo yewebhu lokho kulungile impela futhi ungaqhubeka nokusebenzisa inguqulo yewebhu.Futhi, ukufinyelela i-Google Music, udinga ukuqiniseka ukuthi usunayo i-akhawunti yakwa-Google ngoba izobe ixhunywe kwi-Akhawunti yakho ye-Google.
I-Soundzabound inezinhlobonhlobo zomculo wamahhala kulabhulali yayo enkulu.Iqiniso ukuthi le webhusayithi yakhelwe izinjongo zemfundo, ngakho-ke, qiniseka ukuthi leli sayithi alinakho okungekho emthethweni. Kukhona umculo wamahhala ongatholakali ovumela abasebenzisi bawo noma abafundi ukuthi bawasebenzisele umsebenzi wabo wokufundisa futhi bazijabulise nawo.
Ngakho-ke, ungakhululeka lapho uvakashela leli sayithi i-Soundzabound futhi ngokusobala ulalele noma yini oyifunayo.
I-TuneIn inikeza iqoqo elibanzi lezingoma zazo zonke izinhlobo kubasebenzisi bayo. Empeleni iyinsizakalo ye-freemium exubile enikela ngezinguqulo zamahhala nezikhokhelwayo zewebhusayithi kubo bonke abasebenzisi.Ungakwazi nokuvula ezinye izici zewebhusayithi yomculo engavulelwe ngokuya kokubhaliselwe okukhokhelwayo. Kepha, lokho akuphoqelekile. Ungayijabulela nenkonzo yabo yamahhala. Konke kulele kuwe.
Abasebenzisi bayo abakhululekile abadingi noma yiluphi uhlobo lokubhalisa futhi lokho kuyinto emangalisa kakhulu ngale webhusayithi. Banikela nangemisakazo nezingoma kwiwebhusayithi yabo.Futhi banomsakazo we-inthanethi okuyisici esigqamisiwe.Kunezifunda nezilimi eziningi. Mane ukhethe isifunda okuso futhi uzothola iziphakamiso eziningi kusuka kuwebhusayithi.
Uma kukhulunywa ngomculo, yazi ukuthi iqoqo labo likhulu kakhulu.Banohlelo lwabo lokusebenza. Ngakho-ke, uma ungafuni ukulanda uhlelo lokusebenza ukuze ulalele umculo, ungakhetha ngokukhululekile ukuvakashela iwebhusayithi futhi uyisebenzise. Abasebenzisi banikezwa isilawuli semidiya esihle futhi esigcwele ngokuphelele.
ISaavn iphethwe yiReliance Industries futhi empeleni iyatholakala emhlabeni wonke.ISaavn yiwebhusayithi yomculo waseNdiya. Kepha, ayihlinzeki kuphela ngezingoma ze-Bollywood kepha izingoma ezivela kuwo wonke umhlaba.Ingxenye emangalisayo ngeSaavn ukuthi banikeza nabasebenzisi iRadio.
Ake sithi, uma ufuna izingoma ezithile zebhendi ethile, uzothola uhlu lwazo zonke izingoma zabo olutholakala kusayithi. Hhayi izingoma zabo kuphela. Kepha, futhi nesiteshi esisemthethweni seRadio singasetshenziswa ngokukhululekile kuwebhusayithi yeSaavn.
Ukuqala nge-AccuRadio, asikho isidingo sokwenza i-akhawunti kuwebhusayithi ukulalela izingoma nama-albhamu.Odinga ukukwenza nje, vakashela iwebhusayithi bese uchofoza kunoma yisiphi isiteshi somsakazo esitholakalayo ukuze usithokozele ngokugcwele.
I-AccuRadio ikunikeza ne-inthanethi yamahhala ye-inthanethi ngamathani eziteshi ezitholakala kuyo.Zonke izingoma ezidlalwa eziteshini ze-AccuRadio zaziwa kakhulu futhi ungakujabulela ukuzilalela. Uthola nokukhetha ezinhlotsheni ezahlukahlukene bese uqala ukudlala iziteshi zakho ozithandayo.
Ungakhetha ngokukhululekile noma yisiphi isiteshi somsakazo esitholakala ohlwini lweziteshi eziyizinkulungwane bese uqala ukulalela noma imuphi umculo njengokuthanda kwakho.Uyalazi iqiniso lokuthi iningi lethu lithanda ukulalela iziteshi zomsakazo online ngoba ngaleyo ndlela kuyinto yakudala ukulalela izingoma.
Futhi, kunezikhumba ezahlukahlukene zewebhusayithi ezitholakalayo. Ngakho-ke, awudingi ukusebenzisa isakhiwo esidala, esivamile sokubukeka ngaso sonke isikhathi.Ngakho-ke, Uma ufuna isayithi lomculo elingavinjelwe, iSaavn kungaba inketho enhle kuwe.Isizathu salokhu ukuthi ikunikeza nezingoma nomsakazo oku-inthanethi nawo.
Izinga lomculo ozolithola lihle impela ngezingoma ezahlukahlukene ezitholakalayo.Futhi bane-app yabo etholakala ku-Android naku-iOS zombili.Futhi bangabanye babahambisi bomculo be-Bollywood abasetshenziswa kakhulu.
Ngakho-ke, lawa ngamanye amawebhusayithi omculo angavuliwe kakhulu. Kukhona nabanye abaningi futhi. Ungazisebenzisa kalula ukuthola ukufinyelela kwamathani omculo online noma eziteshini zomsakazo futhi. Udinga ukuqhubeka nokucinga amasayithi wamahhala wokulalela umculo wakho owuthandayo njengoba amawebhusayithi esiwabalile ngenhla enazo zonke izinhlobo zezingoma ezitholakalayo nawo. Iningi lalawa masayithi lithandwa kakhulu futhi lisetshenziswa ngabasebenzisi abaningi. Sithemba ukuthi uyayijabulela.